အမေးအဖြေများ - BST (ဟောင်ကောင်) စက်မှု Co. , Ltd မှ
တစ်ဦး switching power supply ရွေးချယ်ရာတွင်အပေါ်မှတ်စုများ?
1) switching power supply ၏ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးမြှင့်ပေးရန်, ကျနော်တို့အသုံးပြုသူများသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုထက် 30% ပိုပြီးပါဝါတစ်ခုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်တဲ့ယူနစ်ကိုရွေးချယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ စနစ်တစ် 100W အရင်းအမြစ်လိုအပ်ပါတယ်လျှင်ဥပမာ, ကျနော်တို့အသုံးပြုသူများကို output power ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ 130W အတူ SPS ကိုရွေးချယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ထိရောက်စွာသင့် system အတွက် SPS များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
2) ကျနော်တို့ကိုလည်း SPS ၏အပူချိန်နှင့် ပတ်သက်. နှင့်အပူပျောက်ကွယ်သွားများအတွက်အပိုဆောင်းကိရိယာတစ်ခုရှိ, မရှိကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ SPS မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်လျှင်, ငါတို့သည် output power ကိုအချို့ derating အောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "output power ကို" နှိုင်းယှဉ် "အပူချိန်" ၏ derating ကွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ spec စာရွက်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
* ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး function ကို: ကျော်ဗို့အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (OVP), အပူချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (OVP) ကျော်, ကျော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (OLP) Load နှင့်စသည်တို့ကို
* လျှောက်လွှာ function ကို: အချက်ပြရာထူးအမည် (ပါဝါကောင်း, ပါဝါကျရှုံးခြင်း), Remote Control ကို, Remote Sensing နှင့်စသည်တို့ကို
* အထူး function ကို: ပါဝါ Factor ပြင်ဆင်ခြင်း (PFC), မပြတ်မတောက်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး (UPS) function ကို။
အဆိုပါ spec ကနေနိမ့်ဆုံးဝန်လိုအပ်ချက်များကိုကဘာလဲ?
Multi-output power ကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအပေါ်အချို့သောနိမ့်ဆုံး-ဝန်လိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဝန်ချိတ်ဆက်မတိုင်မီပထမဦးဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကိုဖတ်ပါ။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကို output အဘို့အနိမ့်ဆုံးဝန်လိုအပ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်တခြား, ထို output ကိုဗို့အားအဆင့်မတည်မငြိမ်သို့မဟုတ်ပြင်သည်းခံစိတ်အကွာအဝေးရှိလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု. ရည်ညွှန်းပါ " လက်ရှိအကွာအဝေး " အောက်က table ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းသတ်မှတ်ချက်အတွက်: Channel ကို 1 2A နိမ့်ဆုံး-ဝန်လိုအပ်ပါတယ်; ရုပ်သံလိုင်း20.5A လိုအပ်ပါတယ်; channel30.1A လိုအပ်ပါတယ်; channel4ကိုမဆိုအနည်းဆုံး-ဝန်မလိုအပ်ပါဘူး။
output အရေအတွက် CH1 CH2 CH3 CH4
DC ကဗို့အား 5V 12V -5V -12V
rated လက်ရှိ 11A 4.5A 1A 0.5A
လက်ရှိ Range2~ 12A 0.5-4.5A 0.1 ~ 1A0င် ~ 1A
ယေဘုယျအားဖြင့်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပိတ်ပစ်စေမည်နှစ်ခုခွအေနမြေားရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတ Over-ဝန်-ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (OLP) ၏ activation ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်မှကျနော်တို့ output power ကို၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ် OLP အမှတ်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယတဦးတည်းအတွင်းပိုင်းအပူချိန် pre-set ကိုတနျဖိုးရောက်ရှိသည့်အခါ Over-အပူချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (OTP) ၏ activation ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေများအပေါငျးတို့သ SPS ကာကွယ်မှု mode ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ပိတ်ပစ်ပါစေပါလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေများဖယ်ရှားပြီးနောက်, SPS ကျောပုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Power က Factor ပြင်ဆင်ခြင်း (PFC) အစစ်အမှန်အာဏာသိသာအာဏာအချိုးကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝါအချက်န်းကျင် 0.4 ~ 0.6 Non-PFC မော်ဒယ်များ၌တည်ရှိ၏။ PFC ဆားကစ်နှင့်အတူမော်ဒယ်မှာတော့ပါဝါအချက် 0,95 အထက်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတွက်ချက်မှုဖော်မြူလာနေသောခေါင်းစဉ်: သိသာပါဝါ = Input ကိုဗို့အားက x Input အားလက်ရှိ (VA သို့) ပါဝါ Factor (W) က x လက်ရှိရီးရဲလ်ပါဝါ = Input ကိုဗို့အားက x Input ။
ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ၏မြင်ကွင်းကို၏အချက် မှစ. , ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတဖြည်းဖြည်းလျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်ရန်အတွက်သိသာပါဝါထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအာဏာကို generate ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးအစစ်အမှန်အသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်တန်ခိုးတော်အားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပါဝါအချက်ယူဆပါဝါစက်ရုံ 1W အစစ်အမှန်အာဏာကိုအသုံးပြုမှုကျေနပ်ဖို့ 2WVA ထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, 0.5 ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါအချက် 0,95 လျှင်ဆန့်ကျင်တွင်, ပါဝါစက်ရုံသာ 1W အစစ်အမှန်အာဏာကိုပေး 1.06VA ထက်ပိုပြီးထုတ်လုပ်ဖို့ရန်လိုအပ်သည်, ဒါဟာ PFC function ကိုအတူချွေစွမ်းအင်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
Active ကို PFC topology ခြားနားချက်အောက်ကဇယားအဖြစ်ပြသသည်, Single-ဇာတ်စင်တက်ကြွ PFC နှင့် Two-ဇာတ်စင်တက်ကြွ PFC သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
PFC topology အားသာချက် အရေးမသာခြင်း ကန့်သတ်ချက်
1.Zero " အချိန်ကိုတက်ကိုင် " ။ က output ဖြစ်ပါတယ် affected by the AC input directly.
အနိမ့် LED ဘဝသံသရာအတွက် 2.Huge ဂယက်ထလက်ရှိရလဒ်တွေကို။ (တိုက်ရိုက် LED မီးမောင်း)
အလွယ်တကူဝန်ကြောင့်ထိခိုက် 3.Low ပြောင်းလဲနေသောဖြေဆိုသူ။
က output ဘက်မှာမှတ်သားထားတဲ့ -V နှင့် COM အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
- COM (Commons) ဘုံမြေပြင်ကိုဆိုလိုသည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု. :
လူပျို output ကို: အပြုသဘောဆောင်သောတိုင် (+ V), အပျက်သဘောဆောင်သောတိုင် (-V)
အကွိမျမြားစှာ output ကို (ဘုံမြေပြင်): အပြုသဘောဆောင်သောတိုင် (+ V1 + V2), အပျက်သဘောဆောင်သောတိုင် (COM)
အဆိုပါ output ကိုမြေပြင် (GND) နှင့်ဘောင်မြေပြင် (အပြည်ပြည်သွား) ငါ၏အမှုစနစ်အတွက်တူညီတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်, BST ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများထိုကဲ့သို့သောစနစ်အသုံးပြုသောဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အထီးကျန်မှုတွေအယူအဆအပေါ်အခြေခံပြီးဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်ကတည်းကက output ကိုမြေပြင် (GND) နှင့်ဘောင်မြေပြင် (အပြည်ပြည်သွား) သင့် system အတွက်တူညီတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်မရှိပြဿနာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် EMI ဒီကွန်နက်ရှင်အားဖြင့်ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ power supply ၏စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းအမှုအပေါ်အချို့ယိုစိမ့်လက်ရှိလည်းမရှိ။ ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း ဒီယိုစိမ့်လက်ရှိလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်စေလိမ့်မည်နည်း
ကြောင့် EMI ၏လိုအပ်ချက်ရန်, EMC တိုးတက်လာဖို့လိုင်းနှင့်အပြည်ပြည်သွားဖို့ကြားနေ (ကိစ္စတွင်) အကြားအချို့ Y ကို capacitors ရှိရလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား Y ကို capacitors (ပုံမှန်အားဖြင့်အမှုမွကွေီးပျေါမှာမြေပြင်သို့ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်) line ကနေတချို့ယိုစိမ့်လက်ရှိစီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ကိစ္စတွင်မှကြားနေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, IEC-60950-1 ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုအမှုအပေါ်ကိုရှာဖွေအဆိုပါယိုစိမ့်လက်ရှိလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်, ဒီလက်ရှိအိုင်တီပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အ 3.5mA ထက်လျော့နည်းဖြစ်သင့်ကြောင်းလိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာမြေမြေပေါ်မှာလျော်သောကွန်နက်ရှင်ဟာယိုစိမ့်လက်ရှိပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆူညံသံပါဝါထောက်ပံ့ရေးသို့တည်ဆောက်သောပန်ကာတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ ပန်ကာဒ Airflow လျှော့ချအပူလွန်ကျူးနိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအစထုတ်ကုန်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသြဇာလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပရိသတ်များ၏နိမ့်ဆုံး Airflow အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့များကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အသစ်တစ်ခုပန်ကာကို အသုံးပြု. လျှင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု appendage လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသင့်လျော်သော power supply ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ wattage 150W အောက်မှာလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်, ပန်ကာမလိုအပ်ပါဘူး။ 150 ~ 500W အကြား, နှစ်ဦးစလုံးပန်ကာများနှင့်ပန်ကာမပါထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 500W အထက်တစ်ပန်ကာလိုအပ်သည်။
BST ကမ်းလှမ်းမှုကို2yeas အာမခံ
ထုတ်ကုန်အာမခံကာလအတွင်းအရည်အသွေးအပြဿနာရှိပါကကျနော်တို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ; ကျနော်တို့မလျော်ကန်သောတပ်ဆင်ခြင်း, အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယူနစ်နှင့်အတူလက်ကမြင်းမြှုတ်ပေးသောသင်္ဘောများနှင့်တပ်ဆင်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။